ကောင်းကင်ဖြူ: March 2013
သိက္ခာက ဆန္ဒကို လွှတ်ပေးလိုက်တယ်
ကမ္ဘာမြေ တခွင်လုံး သာယာ သွားတော့
နေ့ တွေ ညတွေ ကို သတိမရခဲ့ဘူး … ။
ဒီလိုနဲ့….
ကြွေကျ မြေခ နေတော့
တွဲလက်တွေ ကို ဆုတောင်းမိတယ်
ထာဝရမြဲ ကြပါစေ …. ။
Posted by မောင်ဘုန်း at 5:54 AM 1 comments
လ တပေါင်း ပေမို့ 
ပင်အိုမှာ စိမ်းနု ပျိုတယ်
နှင်းငွေမှုံ စိမ်းနု ခိုလည်း
တောင်စွယ်မှာ ရောင်နီဖြန်း လို့ 
မြေ ‘ ခ ’ တယ် ..... လေး ……. ။
အခါနွေဆန်း လေသွေ့ ပြန်တော့
တောင်က ညို ဖြူတဲ့ စေတီ
‘ သာ ’ ရ တယ် ....... လေး ……. ။
ပန်းထုံတဲ့ လေ အဝှေ့ မှာ
ရွက်ဟောင်းပျံ လေမှာ ဝဲ ရှာ လို့ 
လွမ်း တေးဆို ဌက်ငယ် ကြူး ရင်ဖြင့်
‘ လွမ်း ’ ရတယ်လေး …….. ။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်က ရေးခဲ့ဘူးတဲ့ ကဗျာလေးပါ ... ။ တပေါင်းလပြည့်ည နဲ့တပေါင်းရာသီ ကို လွမ်းနေရပင်မဲ့ စိတ်ထဲမှာ ကောင်းကင်ဖြူ တစ်ယောက် နေမကောင်းဖြစ်နေတာကို စိတ်ပူနေမိရင်း လ တပေါင်း ကဗျာလေး တစ်ပုဒ် လောက် ရေးမယ်လို့စိတ်ကူးထားတာ မရေးဖြစ်ခဲ့ပါဘူး ။
ကဗျာဟောင်းလေးနဲ့ ပဲ တပေါင်းလ ရဲ့ သာယာ အေးချမ်းမှု နဲ့ တူ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ကျနော် မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ အတွက် ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ် ... ။
Posted by မောင်ဘုန်း at 8:01 AM5comments
Posted by မောင်ဘုန်း at 9:05 PM7comments
Posted by မောင်ဘုန်း at 10:08 AM 8 comments
Posted by မောင်ဘုန်း at 9:10 AM4comments